LEGO သည်အရည်အချင်းပြည့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူအခမဲ့နက်နဲသောလက်ဆောင်ကိုပေးသည်
27 / 09 / 2021 27 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 335 Views စာ 1 မှတ်ချက် Classic, Creator 3-in-1, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, Lego Classic, Lego Creator 3-in-1, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, Lego GWP, Lego Master, Lego စူပါမာရီယို, LEGO.com, စျေးဝယ်, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego လက်ရှိတွင် Group သည် UK နှင့်ဥရောပတို့တွင်၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အရည်အချင်းပြည့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူအခမဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လက်ဆောင်ကိုပေးအပ်နေသည်။
freebie အတွက်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ကိုရောက်ရန်သင်ပေါင် ၁၇၀ / € ၁၇၀ ကိုသုံးရလိမ့်မည်။ (စည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများအရ) ထို့အပြင်လက်ဆောင်ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း၏အမှတ်သညာသည်ပြည့်စုံနက်နဲသည် ပိုးအိစံ.
ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကဒါက Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏လက်ဆောင်ဟောင်းများကိုစတော့ရှယ်ယာများရှင်းလင်းခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ပဟေိဆန်သောသဘောသဘာဝသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုဆုများထဲမှတစ်ခုနှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အားလုံးနီးပါးတူသောကမ်းလှမ်းချက်၏အားသာချက်ကိုရယူရန်သင်၌အခွင့်အရေးတစ်ခုသာရှိသည် Lego အဖွဲ့၏အထူးပရိုမိုးရှင်းများသည်အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်အရည်အချင်းပြည့်မီသော ၀ ယ်ယူသူတစ် ဦး အတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်။
၎င်းသည် online အတွက်သာဖြစ်သောကြောင့်သင်စတိုးဆိုင်၌ ၀ ယ်လျှင်မကောင်းပါ။ သို့သော်စတော့များရှိနေသရွေ့၎င်းသည်အောက်တိုဘာ ၅ ရက်အထိအကျုံး ၀ င်သည်၊ ၎င်းသည်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည် အသစ်အစုံ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်သောကြာနေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော freebie ကိုဗြိတိန်နှင့်ဥရောပတို့တွင်သာရနိုင်သော်လည်းအမေရိကန်ပရိသတ်များကဖမ်းယူနိုင်ဆဲဖြစ်သည် Lego MASTERS လျှို့ဝှက်ချက်များစာအုပ်aClassic or Creator 3-in-1 ဒေါ်လာ ၆၀ နှင့်အထက်ဝယ်ယူပါက ၉၉ ဒေါ်လာကုန်ကျသည် Lego စူပါမာရီယို သြစတြေးလျရှိအစုံများသည်အခမဲ့ရွှေဒင်္ဂါးပြားအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ပင်လယ်ဓားပြနေဝင်ချိန်
LEGO သည်အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်တွင်ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် →
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်လို LEGO ပန်ကာဒုတိယအနေနဲ့စဉ်းစားချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းပညာသည်စာနယ်ဇင်းအသွေးကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်၏သွေးပြန်ကြောများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။art ချို့ယွင်းသည်။ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့တူတယ်၊ ပိုဆိုးတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ငါသည်အထိထို LEGO အကြောင်းကိုရေးသားဖို့ရ။ သငျသညျမှာငါ့ကိုပေါ်မှာငါ့နောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ် @brfa_chris.
တစ်ခုမှာ "LEGO သည်အွန်လိုင်းမှမှာယူမှုများနှင့်အတူလျှို့ဝှက်နက်နဲသောလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးသည်"
27/09/2021 at 14:14
_ အခိုက်အတန့်တွင်လက်ဆောင်သည် ၄၀၄၄၀ ဖြစ်သည် Brickheadz ခှေး